पाल्पामा जमिन भासिन थालेसँगै ३३ घर जोखिममा, दुई घर विस्थापित ! «
पाल्पामा जमिन भासिन थालेसँगै ३३ घर जोखिममा, दुई घर विस्थापित !
Published : 27 July, 2020 2:21 pm
तिनाउ गाउँपालिका–३, पानी मिलमा जमिन भासिन थालेसँगै ३३ घर जोखिममा परेका छन् । सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा–बुटवल सडक खण्डको पानी मिलबाट अर्घाखाँची सिमेन्टकोे चुनढङ्ुगा खानी जाने सडकमा पहिरो र जमिन भासिन थालेको छ । पहिरोको कारण दुई घर विस्थापित भइसकेका छन् ।